မေတ္တာခံယူတတ်ပါစေ - Neoxian City
တစ်လောက တရားစခန်းမှာ ဆရာတော်က သူမေတ္တာပို့ပေး နေတယ်၊ မေတ္တာခံယူပေးပါတဲ့။ အဲတုန်းက ဆရာတော်စကားကို သိပ်တော့ နားမလည်ပါ။ တင်ပါဘုရား တပည့်တော် ခံယူပါတယ်လို့ ပဲလျှောက်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်း တွေ့ကြုံလာရတာကို ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မှ မေတ္တာဆိုတာ ခံယူမှ ရတဲ့ အရာပါလားဆိုတာလေးသဘောပေါက်လာပါတယ်။ ဘာနဲ့ တူလဲဆိုတော့ ဆရာက တပည့်သားကို မေတ္တာနဲ့ ဆုံးမပေမယ့် တပည့်သားက အဆုံးအမကို လက်မခံသလိုနဲ့ တူနေပါတယ်။ ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာကို မသိတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို မိမိခံစားချက်နဲ့ မွန်ထူနေလို့ မေတ္တာကို လက်မခံနိုင်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်မေတ္တာနဲ့ ကောင်းတာလေး ပြောလဲ လက်မခံနိုင်တာမျိုးကိုလဲ တွေ့ရတော့ ဆရာတော်က ဘာကြောင့် မေတ္တာခံယူခိုင်းတယ်ဆိုတာနားလည်သလို ရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်အကို လတ်ဆိုရင်လဲ ကိုယ်က ကောင်းတာပြောပေးပေမယ့် သူလုပ်ချင်တာ လုပ်ပါတယ်။ မြေကွက်ဝယ်တုန်းက ဘန်းယဉ်ဘက်ဆို ရေ မြေ ကောင်းတယ် အကြံပေးပေမယ့် သူဝယ်ချင်တဲ့ နေရာ ဝယ်ပြီး အခု သူ ရေဒုက္ခရောက်နေပါတယ်။ ရေတွင်းတူးမရ အဝီစိတွင်း တူးမရတဲ့ နေရာမို့ပါ။
ကျွန်တော် အရင် ပိုစ့်တစ်ခု မှာ ရေးထားမိခဲ့သလိုပဲ ရေခွက်က အသစ်တစ်ခုကို အပြည့်အဝ လက်ခံနိုင်ဖို့ ရေခွက်ထဲက အရာကို အရင် ရှင်းထားရမယ်ဆိုတာပါပဲ။
တစ်ချို့သူတွေက အတ္တနဲ့ မာန်မာန ခံနေတာကြောင့် ကိုယ်က မေတ္တာပေးပေမယ့် သူတို့က လက်ခံမရရှိတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေ ဘယ်လို သင်ခန်းစာရလိုက်လဲ ဆိုတော့ တခြားသူ တစ်ခုခု ပြောလာရင် မေတ္တာနဲ့ ပြောတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြား တစ်ခုခု ကြောင့် ပြောတာလား ဆိုတာ အရင် ခွဲခြားပြီး မေတ္တာနဲ့ ပြောလာတယ်ဆိုရင်လဲ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ နားလည် ခံယူတတ်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ စိတ်နဲ့ ပို့လာတဲ့မေတ္တာတွေကို လဲ အလားတူ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ ခံယူတတ်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ စိတ်နဲ့ ပို့တဲ့ မေတ္တာကိုတော့ တကယ်ရောက်လား မရောက်လား သေချာ သက်သေ မပြနိုင်ပေမယ့်၊ ရောက်တယ်လို့ ကိုယ့်စိတ်က ယုံကြည်ရင် တကယ်ရရှိမှာပါ။
သူတော်ကောင်း သူမြတ်လောင်းတို့ ပေးပို့တဲ့ မေတ္တာကို ခံယူပါတယ်။ အားလုံးကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
အ့တာအမှန်ပဲအကို တချို့ သဘောတရားလေးတွေက တဖြည်းဖြည်းချင်း ကိုယ်တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှ နားလည်လာတာ !PIZZA !LOLZ
@asterkame(1/5) tipped @princekham (x1)
ဒီပိုစ့်ဖတ်ပြီးအသိတစ်ခုခုရလိုက်ပါတယ်....Thanks for your sharing!
@asterkame(1/1) gave you LUV. H-E tools | connect | <><
ယူတတ်မှ ရတဲ့ထဲမှာ မေတ္တာ ရော ပါသလား
အဲဒီလိုတော့ ယုံကြည်လာပါတယ် နောက်ပိုင်းကတော့။
​မေတ္တာသည်သာ ​အေးချမ်းရာ အမှန်ပါ ​အေးချမ်းတဲ့ ​မေတ္တာကို ခံယူတက်ဖို့လည်း လိုပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့။ မေတ္တာကို ခံယူနိုင်ရင် အေးချမ်းတယ်လို့ ယုံကြည်လာပါတယ်။ !PIZZA
မေတ္တာက ပေးတက်ဖို့လည်း လိုအပ်သလို
ဟုတ် မေတ္တာကို ခံယူတတ်ရင် အေးချမ်းတယ်လို့ နောက်ပိုင်းကျတော့ ယုံကြည်ခံစားလာမိပါတယ်။ !PIZZA